Global Voices teny Malagasy » Oganda: Blogren na literatioram-bolongana · Global Voices teny Malagasy » Print
Oganda: Blogren na literatioram-bolongana
Voadika ny 02 Marsa 2009 16:26 GMT 1	 · Mpanoratra Rebekah Heacock Nandika Koloina RAMASINANDRO
Sokajy: Oganda, Haisoratra
Mitombo hatrany ny famahanam-bolongana ataon’ireo mpitoraka blaogy ao Oganda ho toy ny seraseram-pifandraisana ho an’ny haisoratra, sy tononkalo anterineto, manjary malaza izao ny fanaovan-tantara fohifohy sy ny andian-tantara.
Iray amin’ireo mpanoratra betsaka ao anatin’ny blogren I Carsozy  . Ny andian-tantarany, antsoina hoe The Devil's Bonfire (Ny afoben'ny Devoly) , no tantara misy an’I Simon Katende, ilay zatovo Kampalana nipetraka tao an-drenivohitra, namangy ny Raibeny ary avy eo nafangaron’ny toe-javatra izay tsy mbola fantany akory.
Eny an-dalana ho eny amin’ny toeram-pisotrosotroana izy no nahita ity (tovovavy), ngoly tanteraka ny vatany (ity zazalahy) ary nosokafan'ny fahagagany ny vavany, nibolisatra avy eny an-tanany ny vera ary nianjera tamin’ny tany izany.
Tsy inona no anton'izany fa ilay tovovavy avy anaty ala, ilay jipony sy ny aron’akanjony mitovy tsisy valaka, izay efa fahitany fanaovany, saingy tamin’ity indray mitoraka ity kosa dia feno fahadiovana tanteraka izy ary nikiraro fotsifotsy. Nitselatra/nibaliaka toy ny jiron-danonana ny masony, io ihany ilay maso tokana tsara tarehy izay niverina nibanjina azy tao anatin’ny tahotra efa ho ora vitsivitsy lasa tany an’ala izay.
Nitsiky ity tovovavy ary niofaofa tanana an-dratovolahy.
Voatsikera ireo mpamaky mazoto amin'ny fomba malalaka ny tsirairay amin’ireo tantaran’I Carsozy (Valo ankehitriny no efa vonona, ary hanomboka amin’ny volana ambony ny “andiany” vaovao)
Vakian’ny tsirairay avy ao anatin’ny solosainako ao am-piasana amin’ny feo avo ilay tantara “the devil’s bonfire” (Ny afoben’ny Devoly)
Hitanao amin’izany fa mety atao boky mihintsy izy ity. Ary ankehitriny, tsara vintana ihany izahay, afaka ataonay ny mamaky ny lahatsoratra vita tanana mialohan’ny fampielezana indray eo amin’ny taratasy henjakenjana. Iiieeee. Tena marina anie e, mahafinaritra tokoa, mba vakio i Caz.
Mamaham-bolongana andian-tantara ihany koa i Jon Gosier , olona Amerikana iray sy miasa ao Oganda. Tantara anganoangano Afrikana izay ao anatin’ny andiany faharoa i Muxtionary  . Toy izao no entin’I Jon ampahafantarana  azy:
Nametraka lalana telo aho teo am-panoratana ity tantara ity….
Tsy maintsy ao Afrika ny toerana hisian’ny sehatra
Tsy hanao sorona ny tsiro eo amin’ny fomba fanoratro aho
Tsy maintsy mijery ny ho avy izy
Ny anton’io farany io raha ny ankamaroan’ny asan-dahatsoratra mahakasika an’I Afrika dia mijery ny hoe inona no nitranga, inona no tsy nety, iza no nahatonga inona. Manoratra avy hatrany ny fahagola teo amin’ny kontinanta sy ny amin’ny faritra sasantsasany amin’izao tontolo izao ny mpahay tantara Afrikana. Araka ny hevitro, tsia dia misy firy ny olona tia nofinofy (mpandinika). Tiako ny andehanan’ny olona ety ary handefa ny sainy haminavina ireo zavatra mety hitranga. Filozofiako manokana ny hoe raha tsy mijery/maminavina mialoha ny zavatra govana tokony ho azony ny olona Afrikana dia hanana fahasahiranana lehibe tokoa eo amin’ny fiainany ho avy.
Ireo izay maniry ny hamaky ny haisoratr’izy ireo voafintina, dia nandefa Blaogy matetika i Gay Uganda  izay noforonina avy tamin’ny alalan'ny fiainany andavan’andro
Malama vava loatra izy saingy izay mangina hono volamena
Nolotoiny tamin’ny vanjan-tafondro ny rivotra ary nofandrihany, tabataba-
Dia indro, fa noravainy ny halalin’ny fanoherako, hatrany amin’ny hakingako, mba hitazonany ny azy.
Tsy afaka ny tsy hitia azy aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/03/02/1804/
 The Devil's Bonfire (Ny afoben'ny Devoly): http://carsozy.blogspot.com/2009/01/devils-bonfire.html
 Miss Cheri: http://carsozy.blogspot.com/2009/02/devils-bonfire-chapter-8.html?showComment=1235318940000#c4115414308807647726
 Jon Gosier: http://appfrica.net/blog/
 Gay Uganda: http://gayuganda.blogspot.com/2009/02/he-is.html